केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: February 2011
२०१२ अर्थात पृथ्वीको अन्त्य हुने दिन । तपाइहरुलाइ कस्तो लाग्छ के वास्तवमै पृथ्वीमा रहेका सम्पुर्णकुरा नास हुने नै हो त ? हुनत यस्तो अनिष्ट हुदैछ वा पृथ्वीमा भएङ्कर दुर्घटना घट्दैछ पृथ्वीमा पुछ्रेतारा खस्दैछ भन्ने जस्ता हावादारी कुरा नेपालमा पनि हरेक वर्षायाममा एक पटक चलिरहेकै हुन्छन । तापनि अहिले सम्म कहि कतै पुछ्रेतारा त खसेको थिएन तर अवको २०१२ सालमा भने पृथ्वी सकिने कुरा भने के हुने हो थाहा छैन । यस अघि नै २०१२ साल विश्व खतम हुने दिन भनेर केही बैज्ञानिकहरुले घोषणा नै गरी सकेका छन त यसको बारेमा अमेरीकामा चलचित्र पनि बनि सकेका छन् । यसमा पर्खिनु र हेर्नु मात्र बाकी छ कि यो कुरामा कतिको सत्यता छ ।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 5:54 AM3comments: Links to this post
Labels: गन्थन मन्थन
एउटा अपुरो यात्रा
करिव दिउसोको एक बजेको हुदो हो, रानुले विहान देखी केही नखाइ हिडेकीले पेटमा निकै वटा मुसा दौडीरहेको थियो । काउण्टरको माथी झुण्डिरहेको बोर्डमा मुल्य हेरी । लाइनमा चार जनाको पालो पछी उनको पालो आयो । काउन्टरमा उभिएकी इन्डियन जस्तो देखिने केटीले मसक्क मुस्कुराउदै सोधि
गुड आफ्टरनुन ह्वाट उड यु लाइक टु इट म्याम ?
माथि बोर्ड तरि हेर्दै रानुले अर्डर गरिन क्यान आइ ह्याभ अ चिकेन लिजेन्ड प्लिज ।
ह्विच ड्रिङ्कस डु यु प्रिफर म्याम?
स्मल पेप्सि विथ लिल् बिट आइस प्लिज
एनि थिङ्ग इल्स?
ब्यापारीको अन्य थप कुरा बिकाउने उपाय मिसाइ हाली कालीले ।
नो थ्याÍक्यु । इट्स फो सिक्सटी सेभेन प्लिज । टिलमा पैसा जोडेर इन्टर बटम दाब्दै बोली । झोलाको गोजी छामछुम पार्दा पनि चार पाउण्ड पुगेन चानचुन पैसा त्यसैले ५ पाउण्डको नोट झिकेर दिइन्,
योर अर्डर इज बिइङ्ग रेडी,
इट्स योर रेसिट एन थर्डटी थ्री पी म्याम ।
फिर्ता पेनी सहित विल रानुलाइ दिइन ।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 4:22 PM No comments: Links to this post